विश्वको लुप्त स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि एउटा देशको योजना
एक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा निकै भीडभाड छ । यही भीडमा डा प्रभात रिजालले एक बिरामी हेरे, जसको शरीरमा कोतरिएका निशाना र पिटिएका निलडाम थिए।
ती महिलाको अस्पताल आगमन अपेक्षित थियो । हामी जुन अस्पतालको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो नेपालको दाङ जिल्लास्थित घोराहीमा रहेको राप्ति उप–क्षेत्रीय अस्पतालको हो।
सामान्यतया यस्ता चोटग्रस्त महिला साँझ छिप्पिदै गर्दा आइपुग्छन् । हुन्छ के भने यही समय पियक्कड पुरुष मदिरा सेवन गरेर घर फर्किन्छन् र आफ्नी श्रीमतीलाई कुटपिट गर्छन्।
पतिबाट हिंसाकी शिकार भएकी महिला अक्सर आफ्नो पेट दबाउँदै अस्पताल आइपुग्छन् । कतिपय अवस्थामा कानको दुखिरहेको समेत उनीहरुले बताउँछन्।
तर, अस्पतालका डाक्टर र नर्स पहिला यी महिलाका शरीरमा चोट र कोतिरिएको देख्छन् । यिनैबाट यथार्थ पत्ता लागिसक्छ।
ती महिलालाई देख्नेबित्तिकै डा प्रभात रिजाललाई थाहा भइसक्यो कि केही गडबड छ । उनले महिलासँग सोधे– के भयो?
महिला आफ्नो श्रीमान्को पिटाइबाट जागिन अस्पताल आएकी थिइन् । उनको कपाल पसिनाले भिजेको थियो।
रातिको समयमा अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्ष निकै व्यस्त रहन्छ । तर, डा रिजालले एक नर्ससँगै उनलाई एक निजी कोठामा लिएर गए । उनले कोठाको ढोका बन्द गरिदिए।
यसपछि उनले महिलासँग कुरा गरेर पूरा विषयमा जानकारीमा लिए । श्रीमान्ले कुटपिट गर्नु सामान्य कुरा होइन भन्दै उनले सम्झाए– श्रीमान्को यस्तो हर्कत सहनु जरुरी हुँदैन।
केही समयपछि एक नर्सले उनकै नजिक रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र लिएर गइन् । यो त्यो ठाउँ हो, जहाँ यस्तै घरेलु हिंसाका शिकार महिलालाई सहयोग गरिन्छ।
यस्ता केन्द्रमा एक महिला प्रहरी हुन्छिन् । केही सल्लाहकार पनि हुन्छन्, जो महिला मानसिक तनाव र आर्थिक चुनौतीबाट बाहिर निस्किन मद्दत गर्छन्।
पति, लिभ–इन पार्टनर वा व्यायफ्रेन्डबाट हिंसाको शिकार हुने महिलाले स्वास्थ्यसँग जोडिएका निकै समस्या झेल्नुपर्छ । यसको सुरुवात डाक्टरकहाँ पुगेपछि हुन्छ।
कति समय डाक्टर यस्ता समस्याका उपचार मात्रै गर्दैनन्, यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन समेत मद्दत गर्छन्।
यस्ता केन्द्रमा महिलालाई नै नियुक्त गरिन्छ। जसले यी महिलालाई सवै तरिकारले सहयोग गर्न सकुन्।
सामान्यतया जो पनि साथीबाट हिंसाको शिकार हुन सक्छ । तर, महिला यसका शिकार बढी हुन्छन्।
विश्वका कुनै पनि सम्बन्धमा रहेका महिलामध्ये एक तिहाइ यौन तथा शारीरिक हिंसाको शिकार हुन्छन्।
कुनै राजनीतिक वा आपराधिक संघर्षबाट गुज्रिरहेको देशमा यस्ता घटना बढी देखा पर्छन् । जस्तो कि कंगो र युगान्डा जस्ता देश । अहिले पनि एशिया, अफ्रिका र ओशिएनियामा घरेलु हिंसाका घटना निकै हुन्छन्।
यस्तो होइन कि पार्टनरका हातबाट हिंसाका घटना केवल विकासशील देशमा मात्रै हुन्छ। डेनमार्कमा कुल जनसंख्याकको एक तिहाइ महिला जीवनसाथीबाट हिंसा झेलिरहेका छन् । बेलायतमा ३० प्रतिशत जति महिला कम से कम एकपटक आफ्नो जीवनसाथीबाट हिंसाका शिकार भएका छन् । अमेरिकामा हिंसा झेल्ने महिला ३२ प्रतिशत छन्, तीमध्ये १६ प्रतिशतले त यौन हिंसा पनि झेलिसकेका छन्।
पार्टनर वा जीवनसाथीबाट हिंसाका शिकार भएका महिलाको स्वास्थ्यमा निकै खराब असर पर्छ।
अमेरिकामा निकटस्थ साथीबाट हुने हिंसाले १० लाख भन्दा बढी चोटको घटना हुन्छन् । अर्थात् यो मोटोपन र दम भन्दा बढी गम्भीर समस्या हो।
पिडित महिलाई असाध्यै दुःखाइ, दम, निद्रा नलाग्ने, पेटको गडबडी, मधुमेह र यौनजन्य रोगको संक्रमण भएको देखिएको छ।
हिंसा पिडित महिलाले आत्महत्या गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । उनीहरु अक्सर डिप्रेशन, बेहोश हुने, छारे रोग र तनावका शिकार हुन्छन्।
यस्ता महिलालाई जहाँ पहिलो सहयोग मिल्छ, त्यो अस्पताल हो । अमेरिकामा अन्य व्यक्तिको तुलनामा साथीबाट हिंसाका शिकार भएका महिला साढे दुई गुणा बढी अस्पताल जान्छन्।
अमेरिकामा हत्या हुने महिलामा ४० प्रतिशत उनीहरुका निकटस्थ साथी गर्छन् । अर्थात् हिंसाको सुरुवातमै उनीहरुले सहयोग पाएमा उनीहरुको ज्यान जोगिन सक्छ।
बेलायतका अस्पतालका कर्मचारीलाई जुन तालिम दिइन्छ, त्यसमा घरेलु हिंसाका शिकार महिलालाई सहयोग गर्ने तरिका बताइदैन।
जबकी अमेरिकामा अफोर्डेबल केयर एक्ट नामक कानून छ । यसमा हिंसाका शिकार महिलाको बीमामा उनीहरुलाई सल्लाह दिँदा लाग्ने खर्च पनि समाहित छ।
अस्पतालका कर्मचारीलाई घरेलु हिंसाका शिकार महिलाको पहिचान गर्न र उनलाई मद्दत गर्नका लागि तालिम यस कुरामा निर्भर रहन्छ कि उनीहरुको उपचार खर्च कसले तिर्छ ?
अष्ट्रेलियाकी विज्ञ केल्सी हेगार्टी भन्छिन्, ‘सरकार निजी अस्पतालबाट यस्तो मद्दत दिने कुराको अपेक्षा गर्न सक्दैन । कतिपय समयमा स्वयंसेवी संस्था यो काम गर्छन्।’
हेगार्टी भन्छिन्, ‘जुन चुनौती दम र मधुमेह भन्दा बढी छ, त्यसप्रतिको यस्तो नजरअन्दाज समस्याग्रस्त छ । यस्ता महिलालाई सहयोग नगर्नुको नतिजा खतरनाक हुन सक्छ ।’
लेबनानमा भएको रिसर्चबाट थाहा लाग्यो कि हिंसाका शिकार महिलाका बारेमा अस्पतालका कर्मचारी यस्तो ठान्छन्– आक्रामक महिलामाथि यस्तो हिंसा स्वभाविक हो।
नेपालकी नेहा यस्तै घरेलु हिंसा पिडित एक महिला हुन् । नेहा भन्छिन्, ‘जब म प्रहरीकहाँ गएँ । श्रीमान्बाट म कुटिएको घटनालाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।’ त्यसपछि उनी यस्ता हिंसामा परेका महिलालाई सहयोग गर्ने एकद्वार केन्द्रमा गइन्।
बहस यस्तो छेडिएको छ कि अस्पतालका कर्मचारी कुन तरिकाले नेहा जस्ती घरेलु हिंसा पिडित महिला पहिचान गर्छन्?
केही भन्छन्– त्यस्ता महिलाको जाँच गरियोस्, जो पति वा पुरुष साथीकबाट हिंसाका पिडित रहेको सम्भावना छ।
यस्ती महिलासँग सोध्नुपर्छ– के ऊ घरमा श्रीमान्को मारपिटबाट हैरान छ । तर, यो प्रश्नबाट समाधान निस्किन्छ नै भन्न मुश्किल छ।
नेपालको जस्तो व्यवस्थाले महिलाहरुलाई घरेलु र यौन हिंसाबाट जोगाउन सहयो गर्ने धेरै जानकार व्यक्ति बताउँछन्।
सविता (सही नाम होइन) जो हरेक महिनाको एकपल्ट काउन्सिलिङका लागि अाइरहेकी हुन्छिन् (तस्विर: बुनु ढुंगाना)
अहिले भने उनी यो केन्द्रमा राधा पौडेललाई भेट्न आएकी हुन् । राधा उनीसँगै बसिरहेकी थिइन्।
उनले मायाका शरीरमा चोट र निलडाम देखिन् । नजिकै रहेको कागजमा उनको स्वास्थ्य अवस्था र समस्याका बारेमा टिपोट गरिन्।
मायाले टाउको दुखिरहेको, हातमा चोट लागेको, टाउको सुनिएको, मुटु दुखेजस्ता हुने र ढाड दुख्ने समस्या रहेको बताइन् । राधाले मायासँग सानो स्वरमा भनिन्, ‘तिमी पहिले पनि आफ्ना श्रीमान्सँग यहाँ आएकी थियो नि।’
मायाले आफ्ना श्रीमानले यहाँ आउन इन्कार गरेको बताइन् । घरमा बच्चा हेरिरहेको जनाइन्।
मायाले केही महिनाअघि श्रीमानका विरद्ध उजुरी गरेकी थिइन् र त्यसको केही दिनसम्म उनका श्रीमान्लाई थुनिएको थियो।
पछि मायाले श्रीमान्सँग डिभोर्स गर्नका लागि निवेदन हालिन् । केन्द्रकी प्रहरी अधिकारी प्रहरी सविता थापाले उनलाई मद्दत गरेकी थिइन् । थापा यही केन्द्रमा तैनाथ छिन्।
राधाले मायालाई नजिकै रहेको महिलाको एक संस्थासम्म पुर्‍याइन् । जो मायालाई आर्थिक आम्दानीका लागि सहयोग गरिरहेको छ।
नेपालमा पहिलो संकट निवारण केन्द्र २०११ मा खोलिएको थियो । यसको सुरुवात मध्य नेपालबाट भएको थियो । अहिले देशका धेरै अस्पतालसँग मिलेर यी केन्द्रले काम गरिरहेका छन्।
सन् २०१५ मा सरकारले यस्ता केन्द्रका विषयमा नियम कानून तय गरेको छ । अस्पतालका कर्मचारीले यस्ता महिलाको जाँच गरेर सहयोगका लागि सहयोग केन्द्र पुर्‍याउने तय गरिएको छ । यसमा जेपिगो र संयुक्त राष्ट्र संघले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन्।
नेपालमा अहिलेसम्म सयौं स्वास्थ्यकर्मीलाई हिंसा पिडित महिलालाई सहयोग गर्ने विषयमा तालिम दिइसकिएको छ। तालिम स्त्री रोग विशेषज्ञ, फ्यामिलि मेडिसिनदेखि अस्पतालका सामान्य कर्मचारीलाई समेत दिइएको छ।
घोराहीमा रहेको अस्पतालका कर्मचारी हिंसा पिडित महिलाका लागि यो केन्द्र निकै सहयोगी सावित भएको ठान्छन् । सन् २०१३ मा जम्मा ७३ महिला यो केन्द्रमा आए भने पछिल्ला ४ वर्षमा यो संख्या बढेर ४ सय ९३ पुगिसकेको छ।
यो योजनाको प्रोटोकल तय गर्ने मध्य एक सरोज पान्ड भन्छिन्, ‘स्वास्थ्यका कर्मचारी यस्ता महिलालाई सहयोग गर्न हिचकिचाउँथे । महिलालाई यस्ता केन्द्रमा पठाएर उम्किन्थे । कति महिला दोस्रापल्ट आउँदैनथे । कोही डरका कारण घरमै बस्थिन् । कतिले त आत्महत्या समेत गरिसकेका छन्।’
तर, अहिले नेपालका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई हिंसा पिडित महिलाको सहयोगको लागि व्यापक तालिम दिइएको छ । उनीहरुलाई त्यस्ता महिलासँग गर्ने कुराकानीको तरिका सिकाइएको छ ।
यहाँसम्म कि कति कर्मचारीलाई कसरी मद्दत गर्ने भनेर पिडितको भूमिका दिएर सम्झाइन्छ । अदालतको प्रक्रियाको जानकारी समेत दिइन्छ।
कर्मचारीहरुलाई बताइन्छ कि उनीहरुले यस्ता महिलाप्रति सहानभूति राख्नुपर्छ । तालिम दिने ईश्वर प्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘यो सिर्फ एउटा काम मात्रै नभएको भनेर कर्मचारीलाई सम्झाइन्छ । यदि मनदेखि सेवा गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता महिलाको सहयोगबाट आफूलाई टाढा राखे हुन्छ।’
नेपालका अलवा रुवान्डा, ग्वाटेमाला, भारत, इग्ल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका र कोलम्बियामा पनि यससँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था छ । जोर्डन र डोमिनिकन रिपब्लिक जस्ता देशमा त बिराीको जाँच नै गरिन्छ, कहीँ घरेलु हिंसा त होइन भनेर।
जानकार भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तालिम दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्ता महिलाहरु पुनस्र्थापना गर्ने ठाउँको व्यवस्था गरिनुपर्छ । आर्थिक उन्नतीको बाटो देखाउनुपर्छ । यसले मात्रै हिंसाको दुष्चक्रबाट उनीहरु निस्किन सक्छन्।’
घोराहीमा कति समय सहयोग प्राप्त हुन समय लाग्दा महिला यस्ता केन्द्रमा नआउने गरेका छन्।
उनीहरु मारपिट गर्ने पतिका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्नुको सट्टा आफन्तका सहयोगमा समस्या सुल्झाउने कोशिश गर्छन्।
नेपालमा कतिपय अवस्थामा प्रहरी समेत आपसी बातचितबाट समस्या सुल्झाउन सल्लाह दिन्छन् । जबकी यसले महिलामा हिंसा अझै बढ्ने डर बढ्दै जान्छ।
अमेरिकामा भएको एक रिसर्चले यो प्रमाणित समेत गरिसकेको छ।
यदि कुनै महिला प्रश्नको उत्तर दिन हिचकिचाएमा उनीहरुका साथीलाई उनीको सम्बन्धका बारमो सोध्नुपर्छ।
त्यसपछि फेरि सल्लाह दिनेहरुकहाँ पठाउनुपर्छ । यदि महिला सँगै आएका परिवारजन वा नातेदार उनीहरुलाई एक्लै छाड्दैनन् भने कुरा शंकास्पद हुन सक्छ।
लेबनानका जिना उत्सा भन्छन्, ‘जो महिला मारपिट पछि पनि आफ्ना श्रीमानसँग रहन चाहन्छन्, उनीहरुको सुरक्षाका लागि पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ । घरमा कुनै हतियार वा धारिलो वस्तु हुनुहुँदैन ।’
महिलासँग सहयोग गर्नेको नम्बर हुनुपर्छ । हिंसा गर्नेका घरको ढोका यस्तो हुनुपर्छ कि जहाँबाट निस्किन मुश्किल होस्।
जिनान उत्सा भन्छन्, ‘पिपडित महिलासँग कुराकानी गर्नु, उनीहरुका कुरा सुन्नु आफैंमा एउटा उपचार हो । यसबाट महिलालाई आफू एक्लो नरहेको महशुस हुन्छ।’
पतिको हातबाट हिंसाकी शिकार भएकी सविता यो कुरामा सहमत छिन् । एपल्ट उनी जोडदार पानी परिरहेका बेला घोरीहीको मद्दत केन्द्र पुगेकी थिइन्। उनी एक कुनामा बसेर कर्मचारी काम गरिरहेको हेरिरहेकी थिइन्।
तीन वर्ष पहिले उनी यस केन्द्रमा आफ्नो गुनासो लिएर आएकी थिइन् । अहिले सविता अक्सर यहाँ सल्लाह सुझाव लिन आउने गर्छिन् । पछि उनको श्रीमान्सँग सम्झौता भयो र उनी साथ रहन थालेकी हुन्। यही केन्द्रका कारण उनी डिप्रेशनबाट पनि उम्किएकी छिन्।
अहिले सविता हिंसा पिडित अन्य महिलालाई पनि यहाँ पठाउने गर्छिन्। सविता भन्छिन्, ‘सहयोग केन्द्रले जुन तरिकाले उनको रेखदेख ग¥यो । सहयोग ग¥यो । त्यति त मेरा आमाबुवा पनि गर्न सक्दैनन्।’